ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး - Hello Sayarwon
၁။ ကရုဏာရှင် လူမှုကူညီရေးအသင်း
သုံးဆယ်မြို့၊သာယာဝတီ ၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ။
မြို့ပတ်လမ်း၊ဒိုက်ဦးမြို့ ၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ။
၁။ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာ အခမဲ့ သွေးလှူ အသင်း
Ph 9428036098, 09784000000
အမှတ် ၇၀၂ ရွှေသာလျောင်းလမ်းမတန်း အာနန္ဒါဘုရားအရှေ့ ပဲခူးမြို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၂။ တာဝတိန်သာ လူမှုကူညီရေးအသင်း
၃။ ချမ်းမြေ့ဌေယျာဓမ္မစကူးလ်နှင့်ပရဟိတလူငယ်များ အသင်း
ဇိုင်းတောင် မင်္ဂလာလမ်း ချမ်းမြေ့ ဇေယျာ သာမဏေကျော်တက္ကသိုလ်၊ ပဲခူးမြို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၁။ မိုးမေတ္တာ နာရေးကူညီမှုအသင်း
Ph. 0949500260, 09260570009
ရတနာမာန်အောင် ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းဝန်း၊ ခေတ္တရာမြို့သစ်၊ပြည်မြို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
စည်တော်မင်္ဂလာ ရွာဘဲနယ်မြေ. ၊ ပြည်မြို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
၃။ ခတ္တရာ လူငယ်များသာရေးနာရေး ကူညီပံ့ပိုးမှုအသင်း
Ph.05326200, 0949500989. 09250555404
ကန်ဖျားပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ရွာဘဲနယ်မြေ ၊ပြည်မြို့ ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
(၁၃)ရပ်ကွက်။ ဈေးလမ်း။ ရွှေဆံတော်ဘုရားအနီး။၊တောင်ငူမြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ။
ကျွန်းကုန်းကျေးရွာ၊တောင်ငူမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ။
တောင်ငူ (ကေတုမတီ မြို့သစ်)၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
အုတ်ကျွတ်တန်း(၁၀)ရပ်ကွက်(၁၀)လမ်း တံတားထိပ်၊ တောင်ငူ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
၅။၂၄ နာရီ လူမှု ရေး
Ph. ၀၉ ၄၉၄၄၆၀၄၈
ဒက္ခိဏ ရာမ ကျောင် းတိုက် ၊တောင်ငူမြို့နယ် တောင်ငူမြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
၁။ ပါရမီလူမူ ကူညီရေးအသင်း
ညောင်ခါးရှည်စံပြကျေးရွာ၊ဝေါ မြို့ ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ။
Ph. 9428181377, 0942800000
ကွင်းရှေ့(၁)ရပ်ကွက်၊ကညွှတ်ကွင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ။
၁။ ပရဟိတ အင်းမ
ပဲခူးတိုင်း အနောက်၊ ပြည်ခရိုင်၊ သဲကုန်းမြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ။
၂။ ရွှေတောင်နာရေးကူညီမှု အသင်း